साउदीमा श्रीमानको ज्यान गएपछि श्रीमति रुदै शिशिर भण्डारीको अफिसमा आएपछि ७ लाख भन्दा बढि सहयोग बुझाए। कहाँबाट आयो त्यत्रो पैसा ? (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > साउदीमा श्रीमानको ज्यान गएपछि श्रीमति रुदै शिशिर भण्डारीको अफिसमा आएपछि ७ लाख भन्दा बढि सहयोग बुझाए। कहाँबाट आयो त्यत्रो पैसा ? (भिडियो हेर्नुस)
कामको सिलसिलामा साउदी रहनु भएको श्री रेम बहादुर घर्ती मगरको यहि मिति २०७६/०६/२२ का दिन साउदी को याम्बुमा हृदय घातका कारण असामायिक निधन भएको र निजको एक छोरि र दुई छोरा छन् । निजको घरको आर्थिक अवस्था निक्कै कम्जोर भएको र निजको परिवार र छोरा छोरीको उज्ज्वल भविष्यको लागि र पी’डित परिवारको घाउको मल्हम बनेर कलाकार तथा समाजसेवी शिशिर भण्डारीले ७ लाख भन्दा माथिको रकम सहयोग बुझाएका छन् ।
साउदीबाटै रेमका साथीहरुले शिशिर मार्फत सहयोग पढाएका थिए । शिशिरको भिडियोमा भाउजु निकै रुदै बिलौना गरिन् । रेमको उक्त घटना बाथरुम जाँदा भएको कुरा उनले बताईन् । साथै सहयोगीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिईन् ।